UThokoza Stocko – isangoma esiyi-slay queen | Scrolla Izindaba
UThokoza Stocko – isangoma esiyi-slay queen
I-Slay queen noma uStocko kungaba amagama angacasula abanye besifazane.
Kodwa isangoma esivela e-Midrand saziwa emphakathini waso njenge-Slaying sangoma futhi bayasibingelela ngokuthi “Thokoza Stocko” kunokuthi thokoza gogo.
Ngenxa yokubukeka kwakhe okuhle, abantu abaningi ikakhulukazi abesilisa bayamthanda egameni lokuyobonana no-stocko noma i-slay queen.
UReneilwe Mmamolatelo Mhlongo uthe ukuba yisangoma ngeke kumvimbe ukuthi aphile impilo yakhe ngokugcwele. “Ngiyazi ukuthi abanye abantu banehlazo lokuthi izangoma zingabantu abangcolile noma kufanele zigqoke ngendlela ethile, kodwa lokho akulona iqiniso.
• Ngiyisangoma esiqeqeshiwe.
• Ngigqoka ngendlela engifuna ngayo.
• Ngigqoka kahle.
• Nginakekela umzimba wami nomphefumulo wami ngenkathi ngiphilisa abantu.
• Okubaluleke kakhulu ukuthi ngiyasiza futhi ngiphilise abantu
Waziwa ngogogo Mahlasela njengegama lakhe lokhokho, ugogo stocko uthe impilo yakhe yokuba yisangoma ize neminyaka eminingi yokuphika ukuthi akafuni ukuthwasa. Kepha ngemuva kokugula isikhathi eside, izangoma eziphezulu zameluleka ukuthi amukele isipho sokuba yisangoma.
Futhi eminyakeni emibili edlule, waqala uhambo lokuba munye ngokwenza inqubo. Uthole iziqu zobungoma ngesikhathi somvalelo sezinga lesine ngoNtulikazi. “Bekuwuhambo olumangazayo lokuthi ngibe isangoma.
“Kodwa into eyodwa angangiilahlekelwanga kimina ukuba yilowo wesifazane oyi-slay queen,” uyasho.
Umama wezingane ezintathu oneminyaka engama-31 uthe abantu bayamthanda. “Ngithola imiyalezo eminingi ku-inbox yami ezinkundleni zokuxhumana.
“Amanye amadoda angicela ukuthi ngize nje enze sengathi afuna usizo kanti bafuna ukungeshela.
“Okhokho bami bacosha lezo zinhlobo zamadoda ezifuna ukusebenzisa kabi isipho engasinikwa amandla ami aphakeme futhi angibavumeli ukusondela endumbeni yami.
“Kodwa labo abeza ngempela ukuzothola usizo, bathola usizo futhi bayabazisa ubuhle bami ngaso leso sikhathi,” kusho ugogo uMahlasela uyi-slay queen.
Uthe imishwana ethi Thokoza stocko kanye nesangoma esiyi-slay queen akumcasuli kodwa ubona kungukuthakazelela umzimba wakhe omuhle.
• Ngiya ejimini.
• Ngidla kahle
Uthe uyakuthanda ukuba ngumuntu othanda izinto ezintsha, ahlole izinto ezintsha nezingcono empilweni yakhe. “Ngiyakuthanda ukuphuma ngijwayele ukuhamba. Kuphelelisa impilo yami.
Uthe uyazithanda izingane zakhe ezimbili nomndeni wakhe. “Izingane ziyiphuzu lami elibuthakathaka. Ngiyazithanda kakhulu.
“Ngingathanda ukuba nezinye izingane eziningi – okungenani eziyisithupha!”
UGogo stocko uthe impilo ayikho lula nge-Covid-19. Kepha uthe uyasazisa isipho sempilo nokuvikelwa ngokhokho bakhe noNkulunkulu emndenini wakhe.